Izilwane Ezifuywayo | Julayi 2021
Inkampani, Imfundo Yezempilo Cindezela Izilwane Ezifuywayo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imininingwane Yezidakamizwa Inkampani Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Umphakathi Imfundo Yezempilo, Izindaba Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo Izidakamizwa Vs. Umngani
Misa ukulunywa: Ukwelapha kanjani ukungezwani komzimba namakati nezinja
Izilwane ezifuywayo zingaba nezifo zokungezwani komzimba nazo. Kepha kukhona ukukhathazeka ngokuphepha ezungeze iBenadryl yezinja noma amakati? Nayi imithi yokungezwani komzimba nezinja namakati engasiza.
Ungayelapha kanjani i-arthritis ezinjeni
Njengabanikazi bazo, izinja zingakhulisa i-arthritis njengoba zikhula. Alikho ikhambi le-arthritis ezinjeni, kodwa ungasiza i-pup yakho ukuphatha izimpawu.
Bona izinzuzo ezi-5 zezempilo zokuthola ikati
Amakati kungenzeka angabi nesibindi, kepha angaba nemiphumela enamandla enhlalakahleni yakho — ekunciphiseni ukucindezeleka nasekuvimbeleni ukungezwani komzimba nomzimba.
Ungasiphatha kanjani isifo sikashukela ezinjeni
Kunezindlela zokwelapha isifo sikashukela ezinjeni, ngakho-ke i-pup yakho ingaba eceleni kwakho iminyaka ezayo. Nazi izimpawu zesifo sikashukela ezinjeni kanye nezindlela zokwelashwa.
Okubalulekile ukwazi ngokuphatha izinja ngokukhathazeka
Lapho i-pup yakho isaba, kwesinye isikhathi i-Rx ingasiza. Le mithi yokukhathazeka ngenja iyatholakala ekhemisi langakini.
Ungakuphatha kanjani ukuquleka ezinjeni
Ukubanjwa inja okokuqala kungasabisa kepha kungabeki engcupheni impilo. Funda ukuthi yini ongayilindela ekuvakasheleni udokotela wezilwane, ukuthi ungakuphatha kanjani ukuquleka kwenja nokuthi ungonga kanjani emithini yezilwane zasekhaya.
Ungazigcina kanjani izilwane ezifuywayo zizolile phakathi ne-4 kaJulayi
Izinja namakati ngokufanayo kungachithwa kalula ngeziqhumane. Gcina izilwane ezifuywayo zizolile kulo mhlaka-4 Julayi ngokuzilungiselela kahle ngalezi zeluleko.
Ungayigcina kanjani inja yakho iphilile — futhi iphephile — epaki lezinja
Izinja zithembele kuwe ukugwema izingozi indawo yomphakathi yokudlala engaletha. Ukusuka kokukhwehlela kwekennel kuya kumkhuhlane we-canine — nansi indlela yokugcina inja yakho iphilile epaki yezinja.
Ungabelapha kanjani ubuhlungu besilwane sakho
Lapho ikati noma inja yakho isezinhlungwini, konke ofuna ukukwenza ukubenza bazizwe bengcono. Le mithi yezinhlungu yamakati nemithi ethile yabantu inganikeza izinhlungu ukukhululeka ezinjeni.
Kuphephile yini ukwabelana ngemithi nesilwane sami?
Njengabantu, izilwane ezifuywayo kwesinye isikhathi zidinga imishanguzo. Ungabelana ngemithi yakho nesilwane sakho sasekhaya? Thola izimpendulo zalo kanye neminye imibuzo kadokotela wesilwane.
Nakhu ukuthi ungayakha kanjani ikithi yosizo lokuqala (nokuthi kungani kufanele)
Amakiti osizo lokuqala lwezilwane ezifuywayo afaka izimpahla ezitholakala emakhemisi endawo. Lezi zinto eziyi-12 kufanele zibe ngamakhithi wosizo lokuqala wezinja nabanye abangane abanoboya.
Okudingayo ukwazi ngokubeka inja yakho ku-Prozac
Izinja zingaba nokukhathazeka. Ezimweni ezinzima, lokho kungasho ukwelashwa — njengeProzac yezinja. Uma i-pup yakho ibonakala icindezelekile, nakhu okumele ukwenze.
Ngingakwazi ukonga imithi yezilwane zami ezifuywayo?
Kwesinye isikhathi imishanguzo yabantu ingabekelwa nezilwane ezifuywayo. Sebenzisa amakhuphoni wezilwane ezifuywayo ze-SingleCare emakhemisi endawo bese ugcine kuze kufike ku-80% emigqonyeni yesilwane.
Izaphulelo eziyi-10 eziphezulu zemithi yezilwane nge-SingleCare
I-SingleCare inikeza ukonga kadokotela ezinkulungwaneni zemithi. Nayi imishanguzo eyishumi ephezulu yezilwane ongazigcina kakhulu ngekhadi lethu lesaphulelo.
uguliswa umkhuhlane ngaliphi izinga lokushisa
ungahlukanisa amahora amangaki
i-apple cider uviniga ingasiza i-cholesterol ephansi?
I-mobic ithatha isikhathi esingakanani ukusebenza
mangaki mg we-viagra okufanele ngiyithathe